Mucaaridow Madaxweynuhu Waxba Idin Mahayo Qore Mukhtar Cilmi
Monday January 13, 2020 - 08:50:50 in Maqaallo by Wariye Tiriko
waxa dhamaaday dulqaadkii dadweynaha, waxa ishii shacabku si fiican u qabatay shaqsiyaadka caadaystay xumo abuurka iyo samo xabaalka, shaqadoodiina noqotay ka dabo wahwahlaynta xukuumadda jirta,balse aan iyagu wax qorshe ah ilaa hadda soo bandhigin. Hadafkoodoo dhamina isugu biyo shubtay maruun Madaxweynaha talada u hayoMd.Muusebiixi cabdi. taladase kumay darin in hadduu maanta madaxweynuhu goaan ka qaato , damacooda kursinoonimo horseedi karo dagaal sokeeye oon laga soo waaqsan oo daba dheeraada,xornimada JSL-na mar labaad xabaashii 1960-gii ay ku dhacday dib uguceliya.Iyadaoo maanta dowladi jirto oo sharci iyo kala dambeyni jirto shaqsiyaadka caadaystay xume-talintu,maxay samayn lahaayeen hal maalin oo dalku galo jawi dowlad la,aaneed? qof kastaa taas jawaabteeda waa garan karaa.
Madaxweynuhu waa u diyaar inuu doorasho qabto , waa haddii ay doorasho komishinku qabtan, si taasi u dhacdana waa in sifo sharciya loo soo maraa. Labada gudoomiye ee waddani iyo Ucid CIRRO iyo Faysal waxa u muuqda kursiga oo qudha,balse wax dan ah oo ay dadka iyo dalka ka leeyihiin ma jirto. Taasna waxa caddaynaya:
1-komishinka cosob ee maray wadada sharciga ayay rabaan in la diro oo sharciga ay ku doodayaan in dalka laga fuliyo in aan lagu dhaqin oo toodu ay rabaan..runtina sharciga cid kama sarayso komishinkana wuu sii joogaya cidna looma joojin karo.
2- in doorasho degdeg ah la galo taasna soortagal noqon mayso waayo dooeashooyinka xiligooda waa la cayimay baarlamaanka iyo deegaanka 2021 taa guurtidana 2022 waana sharci cidna taas ma badeli karto .
3-mucaaridku wuxuu dalka galiya xaalad jaho-wareer siyaasadeed oo lagu burburinayo kala dambeynta iyo deganaansha jira, si ay ugu suurto gasho damacooda guracan ee keli talisnimo.
Mucaaridka kama madhna ogaanshaha inaanay marnaba suurto gal ahayn inay ku guuleystaan doorashooyinka markaa aanu mar walba khilaaf iyo riwaayad lasoo baxaan CIRRO IYO FAYSAL BA.
Ugu danbayn madaxweynuhu go'aankiisu waa in sharciga lagu dhaqmaa oo komishin la badelayo baa iska yar iyo aan la qaban karin doorasho 2020 madaama ay dadku u baahan yihiin diwaangalin dheer.